သြဂုတ်လ 2015 |4၏စာမျက်နှာ 55 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » သြဂုတ်လ (စာမျက်နှာ 4)
ဂိမ်းအင်ဂျင်နီယာချုပ် (PlayFirst စတူဒီယို)
Glu မိုဘိုင်းတည်နေရာ: ဆန်ဖရန်စစ္စကို, CA အမေရိကန် Glu မိုဘိုင်း @ အဆိုပါ PlayFirst စတူဒီယိုအကြောင်း :. အဆိုပါဂိမ်းအင်ဂျင်နီယာချုပ်ပို ... မျိုးစုံမိုဘိုင်းအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဂိမ်းများကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့အစည်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ် >>
ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများ Editor ကို - အဒမ်မီဒီယာ
F + W ကမီဒီယာ, Inc တည်နေရာ: Avon MA အမေရိကန်အဆိုပါ Acquisitions Editor ကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်စာမူဖန်တီးဖို့စာရေးဆရာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကိုတလျှောက်လုံးစာရေးဆရာဆက်ဆံရေးကိုစီမံခန့်ခွဲ, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် တွဲဖက်. ... နောက်ထပ် >>
ထုတ်လွှင့် Pix Introduces ဗားရှင်း IBC5.0 မှာ 2015 Software များ
အသံလွှင့် Pix ™စက်တင်ဘာ 5.0-2015 ပြေးရသော IBC7 မှာဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်မှု Switcher ၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောလိုင်း (21.B11 ရပ်), အဘို့ဗားရှင်း 15 software ကိုပွဲဦးထွက်ပါလိမ့်မယ် - upgrades Expanded I / O Billerica, မက်ဆာချူးဆက်များအတွက် Virtual သတ်မှတ်မည် Studios က, Router ထိန်းချုပ်ရေး Enhanced Include အမ်စတာဒမ် RAI မှာ။ အဆိုပါအဆင့်မြှင့်တင်မဆိုခွင့်ပြုထားတဲ့ Virtual သတ်မှတ်မည် Studios က, အရည်အသွေးမြင့်ကို virtual ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးတစ်ခုတိုးမြှင် toolset နှင့် Router ထိန်းချုပ်ရေး, features ...
RCS Launchpad နှင့်အတူဆော်ဒီ Pro ကိုဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ထုတ်လွှင့်အပိတ် MBC Pro ကိုအားကစားကန်
အလိုလို Touchscreen ဖျူးအချိန်နှင့်တပြေးညီဒေတာများကိုအဆင့်မြင့်ဇာတ်လမ်းတွေကို Burbank,, CA (သြဂုတ်လ 27, 2015) အတွက်ဂရစ်ဖစ်အတူ - MBC Pro ကိုအားကစားဆော်ဒီအာရေဗျဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေ Reality စစ်ဆေးမှုကမီးလောင်ရာပြည့်စုံ On-ဝေဟင်ဘောလုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူနက်ရှိုင်းသည့် 2015-2016 ရာသီသို့ delve ကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် systems '(RCS) စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Launchpad touchscreen က solution ကို။ ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်ထုတ်လွှင့်မကြာသေးမီကပြုလုပ်စတင်ခဲ့ရာ cloud-based နည်းပညာ, နှင့်အတူ၎င်း၏စတူဒီယို outfitted ...
IBC 2015 မှာ TSL မိတ်ဆက်နယူး TallyMan ရဲ့ Virtual Panel ကို
ရပ်တည်ချက် 2015.B10 အပေါ် IBC 41, ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်စက်ကိရိယာများထုတ်လုပ်သူ, TSL ကုန်ပစ္စည်းများမှာပြုလုပ်ဖန်တီးမှုအဖွဲ့များ, အခွက်တဆယ်ကိုသေချာစေရန်အသစ်တစ်ခုကို Virtual Panel ကို TallyMan တစ်တီဗီစက်ရုံအတွက်အရေးပါသောအခြေခံအဆောက်အဦများအစိတ်အပိုင်းများကိုကိုသြဒိနိတ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုစနစ် option ကိုအပေါ် add မိတ်ဆက်မည် ကင်မရာအော်ပရေတာသတိပြုမိကြသည် (နှင့်ပွညှနျနိုငျသညျ) ထုတ်လုပ်မှုလျှောက်လုံးဆိုင်တဲ့အချိန်များတွင်သက်ဆိုင်ရာစနစ်များကို။ ...